Ulo akwukwo nke Wisdom
Ndi otu Wisdompowder maara nke ọma oke ụgwọ metụtara agụmakwụkwọ dị elu, ebe ọtụtụ n'ime anyị etinye aka na ya onwe anyị. Ọ bụ ezie na nkuzi na kọleji na mahadum ka na-ebili, ụmụ akwụkwọ na ezinụlọ ha na-abụkarị ndị nwere nnukwu ego iji merie.
Companylọ ọrụ anyị kwenyere na agụmakwụkwọ dị elu dị mkpa ma chọọ inyeghachi ma nye ndị ọzọ ihe iji gaa n'ihu na agụmakwụkwọ ha. Companylọ ọrụ anyị kpebiri ịmepụta usoro mmụta maka ụmụ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ na ndị gụsịrị akwụkwọ iji nyere aka zụta mmefu agụmakwụkwọ ha. Anyị na-enye nwa akwụkwọ ọhụrụ mmụta maka $ 1,000 kwa afọ. Ebumnuche anyị bụ inyere ọtụtụ ụmụ akwụkwọ aka kemgbe ọtụtụ afọ ọ bụ ya mere ọ bụ ya mere anyị ji aga akwụkwọ na-aga n'ihu kwa afọ.
Ọkà Mmụta Ọnụ ego
Ego mmụta bụ $ 1000, a ga-akwụnye ya nwata akwụkwọ maka mmefu agụmakwụkwọ ha.
Onye ruru eru maka Nkuzi?
Iji sonye na asọmpi nke mmụta, ndị na-achọ akwụkwọ ga-enwerịrị usoro ndị a:
Ndị niile na-enyocha akwụkwọ ga-debanye aha, ma ọ bụ ka edebanye aha ha, dị ka nwa akwụkwọ oge niile na mahadum ma ọ bụ mahadum mahadum kwadoro na USA maka ọkara afọ agụmakwụkwọ ha na-etinye iji nweta akwụkwọ mmụta ahụ.
Kwesịrị ịnọ na agụmakwụkwọ dị mma na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ gị ugbu a
Maka ndị na-achọ akwụkwọ n'okpuru 3, ị ga-enwerịrị ikikere site na nne na nna ma ọ bụ onye nlekọta iwu
4.Nwere obere GPA 3.0 (na ogo 4.0)
5. Kwesịrị itinye aka na asọmpi ahụ site na email ma nye aha gị na aha ụlọ ọrụ ị na-aga ma ọ bụ na-ezube ịga.
Ndị a bụ usoro iji tinye maka mmemme mmụta mmụta:
1.Write edemede nke 1000+ okwu na isiokwu "Gịnị ụbụrụ Mmeju nwere ike na-enweghị ike ime?"
Y ghaghi itinye edemede gi na ma obu tupu March 2st, 31.
3.A ga-eziga ngwa niile [email protected] n'ụdị Okwu naanị. A gaghị anabata PDFs ma ọ bụ Njikọ na Google Docs.
Ikwesiri ịkọ aha gị, aha mahadum gị, nọmba ekwentị, na adreesị ozi-e na ngwa agụmakwụkwọ.
5.Jide n'aka na edemede gị enweghị atụ na okike.
6. Agaghị anabata nghọtahie, ma ọ bụrụ na anyị achọpụtala na ị depụtaghachiri ederede ahụ site na isi ụzọ ọzọ, a ga-ajụ ngwa gị ozugbo.
Ikwesighi ịnye ozi ọ bụla ọzọ karịa nke ahụ edepụtara n'elu.
8 Mgbe emechara ngwa ahụ agafeela, ndị otu anyị ga-ekpebi edemede gị banyere okike, uru ị nyere, yana echiche ya.
9. A ga-ekwuputa ndị mmeri na Eprel 15th, 2020 na email ga-agwa onye mmeri ahụ.
Olee otu anyi si enyocha ngwa?
Ndi isi oru ngo a ga - enyocha oru gi nke gha enyere ndi okacha amara n ’ulo oru anyi aka. Anyị na-asọpụrụ nzuzo gị ma ghara ikpughe ozi kọntaktị gị maka ndị ọzọ, ma ọ bụ iji ya maka uru onwe anyị n'ụdị ọ bụla. N’agbanyeghi, anyị na-edobe ikikere iji echiche gị n’ime ọrụ ụlọ anyị.
Ntinye aka gi na akwukwo akwukwo putara ihe nke gi di nma ma inwere ike họrọ ma isonye. Iji tụọ anya maka agụmakwụkwọ site na Wisdompowder.com, enwere ike ịchọrọ ka ị nyefee data na elektrọnik.
Ngwa gị nyere Wisdompowder.com, ndị nnọchi anya ya na / ma ọ bụ ikike ndị nnọchite anya iji wee debanye ozi ndị a: aha onye na-arịọ arịrịọ, ịga kọleji, foto kọleji, email, ego ntinye na edemede na Wisdompowder.com ma ọ bụ na nkwukọrịta ahịa ndị ọzọ, gụnyere mana ọnweghị oke na webụsaịtị, akwụkwọ akụkọ, social media na akwụkwọ mgbasa ozi.
Anyị nwere ike iji ozi ịkpọtụrụ gị iji gosi nnata nke ngwa gị, iji kpokọta ozi ndị ọzọ ma ọ bụrụ na enwere ajụjụ gbasara ngwa gị, iji zitere gị ọkwa banyere ọnọdụ gị, ma ọ bụ maka nkwukọrịta dị mkpa maka ngwa.
A na-emebi ozi niile gbasara nha anya gbasara ntozu onye na-arịọ arịrịọ ozugbo enwere nkwenye ma mara ọkwa. Agaghị eji adreesị ozi email ma ọ bụ akara ekwentị maka nzube ahịa ọ bụla.